एसडीएस ड्रिल - iSearch
सुरु आफैलाई उपकरण एसडीएस ड्रिल
1 एसडीएस अभ्यासहरू लचीला प्रयोग गर्न सकिन्छ
2 एसडीएस अभ्यासहरूको फाइदा
3 एसडीएस अभ्यासहरूको लक्षण
4 विभिन्न एसडीएस प्रणालीहरू बीचको भिन्नता के हो?
5 एसडीएस प्रणालीको फाइदा के हो?
6 एसडीएस प्रणालीको आवेदन क्षेत्र
7 प्रयोग गर्न सजिलो
8 प्रो जस्तै काम
9 एसडीएस शाफ्टको विशेष विशेषताहरू
10 सबैभन्दा लोकप्रिय एसडीएस अभ्यास
एसडीएस अभ्यासहरू लचीला प्रयोग गर्न सकिन्छ
क्लासिकल एसडीएस ड्रिल अभ्यासको लागि द्रुत-परिवर्तन प्रणाली हो। यो प्रणाली बश कम्पनी 1975 द्वारा विकसित गरिएको थियो। TE हिलटी द्वारा विकसित टी रेकर्डिंग यस द्रुत-परिवर्तन प्रणालीबाट पनि आएको छ। धेरै क्षेत्रहरूमा एसडीएस विशेष प्रत्यक्ष प्रणालीको लागि खडा हुन्छ। यस्तो एसडीएस अभ्यास सामान्यतया रोटरी ह्यामरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू ठुलो अनुप्रयोगहरूको लागि कंक्रीट र कंक्रीटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ चिनाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर एसडीएस अभ्यासहरूको फाइदाहरू के हुन्?
एसडीएस अभ्यासहरूको फाइदा
एक एसडीएस ड्रिल एक विशेष एसडीएस पिकअप उपकरण संग सुसज्जित छ। उहाँ मुख्य रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ combihammers र हथौड़ाहरू। यो एक छिटो परिवर्तन प्रणाली संग सुसज्जित एक ड्रिल हो। यो मुख्य रूपमा काम गर्नका लागी हो Mauerwerk, कंक्रीट वा ढुङ्गा। यस प्रणालीले एसएसडी उपकरण धारकसँग सुसज्जित सबै ह्यामरहरूको लागि उपयुक्त छ। यदि एक एसडीएस ड्रिल खरिद गरिएको छ भने, यो सम्भव छ कि विभिन्न डिजाईन र साइजहरू बीच छनौट गर्न सम्भव छ। ड्रिल जुन सम्बन्धित कामको लागि उपयुक्त छ पूर्णतया उद्देश्य प्रयोगमा निर्भर हुन्छ। तथापि, मस्यौदा तयार हुने सामाग्री र आकार आवश्यक छ जब एसडीएस ड्रिल खरिद गर्दछ। ड्रिलको आकार सधैं यसको व्यासलाई बुझाउँछ। तर उपकरणको लम्बाई पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। कुल र कामको लम्बाइको बीच एक भेद हुनु पर्छ। कामको लम्बाइ सधैँ ड्रिलको क्षेत्रलाई बुझाउँछ जसमा सामग्रीहरू खाली गर्न सर्इरहरू प्रयोग गरिन्छ। अर्को लम्बाई, अर्को लम्बाई, प्राप्त प्राप्त शाफ्टको लम्बाइ र कामको लम्बाइ बाट परिणाम।
der रोटरी हथौडा GBH 2-20 D बॉश प्रोफेश्नलबाट - 600 वाट र 1,7 Joule प्रभाव ऊर्जाको साथ
एसडीएस अभ्यासहरूको लक्षण
प्राय: एसडीएस अभ्यासहरू ह्यामर अभ्यासका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो मेहनत धातुबाट बनेको छ। उदाहरणका लागि, कोबल्ट वा टंगस्टन कार्बाइड को अन्नटाइपको संरचना विशेष रूपमा उपकरणको पहेलोको लागि निर्णायक छ। उच्च गुणस्तरको सामाग्रीबाट बनेको उपकरण चयन गरेर, जीवनकाल तदनुसार बढ्न सकिन्छ। सामाग्री टंगस्टन कार्बाइड को एकाग्रता अधिक, उपकरण को सेवा जीवन को उच्च। त्यसैले यो सधैं एक राम्रो गुणमा तिर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्छ। यो राम्रो छ, यदि खरीद थोरै गहिराइमा गहिरो छ। त्यसपछि तपाईं आफ्नो एसडीएस ड्रिलसँग निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं धेरै वर्षको लागि आफ्नो एसडीएस ड्रिल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अभ्यासहरु को उपयोग को ड्रिलिंग र संयोजन अभ्यास मा एक एसडीएस प्राप्त शंकर संग प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक विस्तृत श्रृंखला प्रणाली उपलब्ध छ।
विभिन्न एसडीएस प्रणालीहरू बीचको भिन्नता के हो?
पहिलो एसडीएस संस्करण बोस्च द्वारा विकसित गरिएको थियो। यो बजारमा हिटीको टी छविको थप विकासको रूपमा पेश गरिएको थियो। आजको संसारमा, प्रणाली प्राय: एसडीएस-प्लस भनिन्छ। यो माउन्ट 10 किलो को तहत वजन वाले सबै हथौड़ों को लागि5मिमी को एक सामान्य शाफ्ट व्यास संग उपयुक्त छ। कम्पनी हलिटीले यस्तो रेकर्डिङसँग अभ्यासको लागि नामकरण टी-सी प्रयोग गर्दछ। पछि, एसडीएस प्लस नाम एसडीएस-अधिकतम को नामकरण गरियो। एसडीएस-अधिकतम रिसेप्टरहरू शाफ्ट व्यासको साथमा लैजान सकिन्छ 18 मिमी उदाहरणका लागि5किग भन्दा बढी भारी ह्यामरहरूको लागि। हिल्तीमा, एसडीएस-अधिकतमलाई TE-Y भनिन्छ। अलिकति कम सामान्य अभ्यासहरू छन् जुन एक SDS-top वा TE-T रेकर्डिङसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी प्रणालीहरूमा 14 मिमीको समानता शाफ्ट व्यास छ। एसडीएस-द्रुत प्रणाली मात्र केही बोस उपकरणहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
एसडीएस प्रणालीको फाइदा के हो?
एसडीएस प्रणालीमा अन्य शैफ्टहरू प्राप्त गर्दै दुईवटा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू छन्, जस्तै बेलनाकार शंक वा एक हेक्सागोनल शंकर। सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो, निस्सन्देह, आवश्यक मिसिन रेलको सजिलो र छिटो परिवर्तन प्रणालीले सम्भव बनायो। कुनै उपकरणलाई सम्मिलित उपकरणको परिवर्तनको लागि आवश्यक छैन, उदाहरणका लागि, एक छेउ र ह्यामर ड्रिल बीच। दोस्रो फाइदा हो कि एक राम्रो बल ट्राफिक सम्भव छ। ड्रिल चक मा एक ड्रिल को साथ साथै टोक टोक को ट्रांसमिशन को एक एसडीएस प्रणाली मा एकै देखि अलग देखि लिया जा सकता। मिति लागू हुन्छ एसडीएस बोस्च अझै पनि सबैभन्दा लोकप्रिय प्रणालीमा छ। सबैभन्दा विविध निर्माताहरू छनौट महान छ। तदनुसार, एक एसएसडी छवि धेरै अभ्यासहरूको लागि भेट्टाउन सकिन्छ। बोस्श को अतिरिक्त मा, मेकिता र मेटाबो को धेरै एसडीएस अभ्यास प्रदान गर्दछ।
एसडीएस प्रणालीको आवेदन क्षेत्र
चिनाई र प्राकृतिक पत्थर प्रायः एक मेहनत धातु ड्रिल संग बनाइन्छ। 52 मिलिमिटर सम्म व्यासको साथ विशेष रूपमा मेहनत-मेडिकल-ड्रिल अभ्यासहरू पर्खालहरूका लागि एकदम सही छन्। ठोस उपयुक्त। एक पत्थर ड्रिलको अवस्थामा, टिप सामान्यतया 120 डिग्रीको कोणमा हुन्छ। एक विशेष कंक्रीट ड्रिलमा, अगाडि सुझावहरूमा 130 डिग्रीको कोण छ। तथापि, धेरै कंक्रीट ड्रिलिंगका लागि, यो ड्रिल बिट प्रयोग गर्न पनि सम्भव छ जुन प्रायः पत्थरका पर्खालहरूमा प्रयोग गरिन्छ। वायवीय ड्रिल ह्यामरहरूको अवस्थामा, एसडीएस प्लसमा विशेष सुविधा छ कि उपकरणले कार्य परिवर्तनलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ। पत्थरबाट कडा कंक्रीट पर्खालहरूबाट, सबै कुरा सजिलै सजिलै ड्रिल गर्न सकिन्छ।
एसडीएस अभ्यास शब्दहरूको पछाडि एउटै प्रणालीको लागि सबै भन्दा फरक अर्थ लुकेको छ। यो शब्द मुख्य रूप देखि अभ्यास संग सम्बन्धित छ, जो विशेष रूप देखि ड्रिलिंग सिस्टम सिस्टम को लागि प्रयोग गरिन सक्छ। वास्तवमा नाम Bosch बाट आउछ। यो विभिन्न उपकरण र हात उपकरणको उत्पादनमा विशेष छ। द्वारा राम्रो गुण बोस्चले बजारमा राम्रो नाम बनाएको छ। कम्पनीले यो शब्दलाई यसको प्लग-र-घुट सिट ड्रिलको रुपमा उल्लेख गरेको छ। चाहे एसडीएस, एसडीएस-प्लस वा स्पेशल डायरेक्ट सिस्टम - सबै प्रणालीले फाइदा प्रदान गर्दछ कि तिनीहरूले अत्यन्त व्यावहारिक साबित गरेका छन्। अभ्यासहरु को किनारों मा विशेष grooves संग सुसज्जित छ। यो ड्रिल चकमा। यसले इष्टतम पकड़ सुनिश्चित गर्दछ। एकै समयमा, प्रणालीहरूले एक अनुमति दिन्छ उत्कृष्ट पावर ट्राफिक, अन्य प्लग-इन प्रणालीहरूको तुलनामा, एसडीएस अभ्यासले कुनै अतिरिक्त उपकरणहरू आवश्यक छैन। क्लिम्पिंगको लागि ड्रिलिङ रङहरू र अनलक्याम्पिंग सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ। तपाईले मात्र यो उद्देश्यको लागि प्रदान गरिएको उपकरणमा ड्रिल क्लैंम्प गर्नु पर्छ। त्यसपछि तपाईंले स्नैपप जाँच गर्नुपर्छ र तपाईंले आफ्नो काम सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। ड्रिल टाउको अन्डक्लिम्पिंग गर्दा बिट फिर्ता लिनु पर्छ। नतिजाको रूपमा, कुचले ग्रोभहरू संलग्न गर्दछ र तिनीहरूलाई पराजित गर्छ। एक ड्रिल मेसिनबाट सजिलै हटाउन सकिन्छ। उपकरणको आधारमा हैंडलिंगमा केही साना मतभेदहरू छन्। एक एसडीएस ड्रिल को वास्तविक सिद्धान्त सबै मोडेलहरुको लागि बनेको छ।
प्रो जस्तै काम
यदि तपाईंले एसडीएस ड्रिल खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं गलत हुन सक्नुहुन्न। उत्तम काम इष्टतम सीट संग सम्भव छ। तपाईं पारंपरिक clamping ड्रिल टाउको संग ड्रिल थोडा एङ्गले क्लैंम्प गर्न सक्नुहुन्छ। यो लाभ छ कि एसडीएस ड्रिल सधैं ड्रिल टाउको मा केन्द्रित हुन्छ। नतीजा यो हो कि तपाईं सुस्त र ठीक तरिकाले पेशेवर जस्तै काम गर्न सक्नुहुन्छ। साथै विभिन्न आकारहरूको बीचमा सजिलो र छिटो परिवर्तन अब ठूलो समस्या छैन। परिवर्तन सधैं सम्भव छ, त्यसैले धेरै काम गर्ने समय हराएको छैन। निस्सन्देह, तपाई सधैँ सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि एसडीएस ड्रिल किन्नु भन्दा पहिले तपाइँको मिसिनले योका लागि सुसज्जित छ। यदि तपाईं नयाँ ड्रिल खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई निश्चित गर्नु पर्छ कि ड्रिल वा ड्रिल बिट क्षतिग्रस्त छैन ड्रिल कलर एसडीएस प्रणालीसँग मिल्दो छ।
एसडीएस शाफ्टको विशेष विशेषताहरू
एक ड्रिल सधैं एक छ उच्च लुगा उजागर। सीधा किनारों जहाँ ग्र्रोभहरू स्थित छन् किनकि, सामग्री प्राय: बलियो हुन्छ। तदनुसार, परिवर्तन यस क्षेत्रमा अक्सर आवश्यक हुन्छ। सामग्रीको पहिरन सेनाको सबै ट्राफिक माथि उपस्थित छ। एसडीएस शंकु को आविष्कार गरेर, एक अभिनव कार्य टुक्रा विकसित गरियो कि पछिल्लो सालों मा एक देखि थप सटीक ड्रिल परिणामहरू मद्दत गरेको छ। प्रणाली न केवल ड्रिलिंग मिसिनहरु को लागि प्रयोग गरिन्छ, तर धेरै हथौड़ाहरु लाई पनि। लामो समय सम्म एसडीएस प्लस प्रणाली को लागि कुनै पेटेंट छैन। यस प्रणाली यसैले धेरै अन्य ड्रिलिंग मिसिन निर्माताहरु द्वारा बोस्श को बिरुद्ध प्रदान गरिन्छ। विशेष गरी कम्पनी Hilti यो एसडीएस ड्रिल प्रणालीमा ठूलो चासो व्यक्त र मा फरक विभिन्न उपकरणहरू प्रदान गर्दछ।
सबैभन्दा लोकप्रिय एसडीएस अभ्यास
एक लोकप्रिय प्रणाली यो हो बोस्ट प्रो ह्यामर ड्रिल एसडीएस प्लस5सेट गर्नुहोस्। यो सेट सबै हैमरहरूको लागि एसडीएस प्लस माउन्टको लागि उपयुक्त छ। उपकरणमा एक लामो जीवन मेहनत धातु हो र एक लामो सेवा जीवन छ। यो धेरै प्रतिरोधी छ र धेरै वर्षको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, यो दृश्यात्मक पहल सूचक संग सुसज्जित छ। मकिता अर्को राम्रो प्रस्ताव हो। एसडीएस प्लस ड्रिल र छिलेल सेट डी-एक्सएनएमएक्ससँग पनि राम्रो गुण छ। यो एक 19180-सेट हो कि एक अपमानजनक एल्युमिनियम मामलामा। यदि अवस्थामा, 17 ड्रिल बिटहरू, एक चिसो छेउ, एक फ्लैट छेउ र एक विस्तृत छेउ समावेश गरिएको छ। ह्यामर ड्रिल सेट को लागि डिजाइन गरिएको छ कंक्रीट, पत्थर, ग्रेनाइट र अन्य कठिन सामग्री। तथापि, एक विकल्प को रूप मा, एस एन्ड आर पेशेवर हथौडा अभ्यास प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मोडेल बहु बहु भाग पनि हो। यो सेटमा7भागहरू हुन्छन् र राम्रो मूल्य / प्रदर्शन अनुपात छ। एसडीएस ड्रिल सामान्यतया चिनाई, प्राकृतिक पत्थर वा कंक्रीटका लागि प्रयोग गरिन्छ। एकै समयमा, उपकरणमा नामक विनाशकारी प्रभाव छ। यो प्रबलित विनाश दाँत द्वारा सम्भव बनाइएको छ, जुन सुझावहरूमा जोडिएको छ। नतिजाको रूपमा, माइक्रोक्रोकहरू ड्रिलिङ सामग्रीमा सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो लाभ छ कि एक सुधारिएको सुधार ड्रिलिंग गति उपलब्ध छ।
बॉश प्रोफेशनल २2607019927००१ XNUMX XNUMX २ ha हथौड़ा ड्रिल, आकार प्रदर्शन
ह्यामर ड्रिल पेशेवर प्रोसेसिंग को लागी चिनाई र कंक्रीट को लागी उपयुक्त छ
व्यास:5/6मिमी, कामको लम्बाई: 50 मिमी, कुल लम्बाई: 115 मिमी
व्यास:6/ 8 / 10 मिमी, कामको लम्बाइ: 100 / 100 / 100, कुल लम्बाई: 165 / 165 / 165 मिमी
सेट आकार: 197 X 87,5 X 23 मिमी
बॉश प्रोफेशनल--टुकड़ा हथौड़ा ड्रिल एसडीएस प्लस-5 एक्स सेट (कंक्रीट र चिनाईका लागि, मजबूत लाइन, सामान हथौड़ा ड्रिल)
सब भन्दा लामो सेवा जीवन: ड्रिलिंग बलको वितरणको मतलब प्रदर्शनको नोक्सान हुँदैन
बलियो र भरपर्दो: कार्बाइड ड्रिल हेडले असाधारण प्रभाव प्रतिरोधको सुनिश्चित गर्दछ
अनुप्रयोगको क्षेत्र: चिनाई, क concrete्क्रीट र प्रबलित कंक्रीटमा प्रयोगको लागि उपयुक्त
अनुकूलता: SDS प्लस होल्डरको साथ सबै रोटरी हथौड़ोंका लागि उपयुक्त
वितरणको स्कोप: १ x हथौड़ा ड्रिल SDS Plus-1X - mm मिमी, कार्य लम्बाई: mm० मिमी, कुल लम्बाई: ११ mm मिमी / १ x हथौडा ड्रिल SDS Plus-7X - mm मिमी, कार्य लम्बाई: mm० मिमी, कुल लम्बाई: ११ mm मिमी / १ x हथौड़ा ड्रिल SDS Plus- X X - mm मिमी, कार्य लम्बाई: १०० मिमी, कुल लम्बाई: १5 मिमी / १ x हथौड़ा ड्रिल SDS Plus-50X - mm मिमी, कामको लम्बाई: १०० मिमी, कुल लम्बाई: १115 मिमी / १ x हथौड़ा ड्रिल SDS Plus-1X - १० मिमी, कार्य लम्बाई: १०० मिमी, कुल लम्बाई: १7 मिमी
बश एसडीएस-प्लस एडाप्टर (चक संग, रोटरी ह्यामरहरूको लागि) डिस्प्ले
एसडीएस प्लस एडेप्टर डिल चकको साथ बॉशबाट एक्सेसरीज गर्नका लागि
ड्रिलको सुरक्षित होल्ड इष्टतम पावर ट्रांसमिशन सक्षम गर्दछ
एसडीएस-प्लस एडाप्टरसँग स्प्रोकेट ड्रिल चकलाई प्रकाश अभ्यास स्वीकार गर्न डिजाइन गरिएको छ
एसडीएस-प्लस धारक संग रोटरी हम्मरहरुमा पारंपरिक ड्रिल चक संग प्रयोग को लागि एसडीएस-प्लस एडेप्टर
वितरणको दायरा: एसडीएस-प्लस एडाप्टरको साथ चक 1,5 - 13 मिमी ड्रिल गर्नुहोस्, स्प्रोककेट चक इनक्ल। कुञ्जी (3165140101813)
बॉश 3tlg। Chisel SDS- प्लस सूचक सेट
1 SDS- प्लस पोइन्ट छेस्को 250 मिमी (चिनाईमा क concrete्क्रीट र ब्रेकथ्रुमा विध्वंस र सुधार कार्यको लागि), 1 SDS- प्लस छेस्को 20 x 250 मिमी (कंक्रीटका लागि चिनाई खुल्ने र ब्रेकथ्रुको लागि)
एसडीएस प्लस प्रणाली मार्फत द्रुत, उपकरण-रहित ड्रिल र छेन्जा परिवर्तनले धेरै समय र प्रयास बचत गर्दछ
लाइट अभ्यास र एसडीएस-प्लस धारकको साथ सबै विद्युत उपकरण ब्रान्डहरूको प्रभाव ह्यामरहरूका लागि उपयुक्त
आयाम: 290 एक्स 52 एक्स 52
बॉश प्रोफेशनल ड्रिल बिट एसडीएस-प्लस-एक्सएनयूएमएक्स (Ø5मिमी) प्रदर्शन
चिनाई र कंक्रीटको व्यावसायिक प्रशोधन
व्यास x कामको लम्बाई x कुल लम्बाइ: 20 X 400 X 450 मिमी
SDS-plus माउन्ट गर्ने सबै ह्यामरहरूको लागि
राम्रो स्थायित्व र स्थायित्वका लागि टिकाऊ कडा धातुबाट बनेको। ड्रिल टाउकोमा टुथड हार्ड मेटल र aten-सर्पिल टर्बो डिजाइन पेटिted बिना ड्रिलिंग धूलोलाई कुशलतापूर्वक हटाउनको लागि। स्पष्ट रूपमा पहिरन सूचकको साथ।
दुई काट्ने किनाराहरू, अनुकूलित सोल्डरिंग र हार्डनिंग टेक्नोलोजीसँग निर्मित ड्रिलको मजबुतता बढाउन र ड्रिलिंगको समयमा कम्पनहरू कम गर्न।
बश प्रोफेशनल 3tlg। Chisel-Set लामो जीवन एसडीएस-प्लस सूचक
चिनील र चिनीको व्यावसायिक प्रसोधनको लागि सेट
बिन्दु छेउमा: कुल लम्बाइ 250 मिमी; फ्लैट क्रिसल: समग्र लम्बाइ 250 मिमी, कुर्सी किनार 20 मिमी; टाइल छेउ: समग्र लम्बाइ 260 मिमि, कुर्सी किनार 40 मिमी
SDS-plus chisel अनुलग्नकसँग वा प्रयोगको लागि उपयुक्त वा सीडीएस-प्लस ह्यामरहरूमा रोटेशन स्टपका साथ उपयुक्त
विभिन्न पुनरुत्थान र पुनरुत्थान कार्यको लागि उपयुक्त चिसोहरू जस्तै संयुक्त नविकरण, पर्खाल र फर्श टाइल हटाउन, चिन्तित र कंक्रीटमा अनुकूलन कार्य र सुदृढीकरणको जोखिम
लामो लामो जीवनको लागि लामो जीवनको गुण र पारंपरिक चिसो भन्दा बढी हटाउने
HILTI 7613023579243 6१1०२5 12 २6 सक्कली TE-CX सेट ()) MXNUMX ड्रिल सेट एसडीएस प्लस -XNUMX-१२mm ड्रिल बिट क concrete्क्रीटका लागि, pieces टुक्रा
सब्जिट सामाग्री: प्रबलित कंक्रीट, कंक्रीट, ईंटहरु, चिनाई
कार्य मोड: ह्यामर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग
उपकरणको प्रकार: पुरुषको अन्त्यमा सबै उपकरणहरू TE-C (एसडीएस प्लस)
4 कार्बाइड संग पूर्ण टंगस्टन कार्बाइड सिर किनारों को काटने अभिनव X-ज्यामिति मा इष्टतम हटाउने प्रदर्शन को लागि
विशेष2अवयव कार्बाइड (ढाँचा प्रविधि) धेरै पटक राम्रो प्रभाव पारेको छ। B. लोहा हिटमा
मकिता D-42444 SDS + ड्रिल बिट / छेस्को सेट 17tlg, 1 W, 1 VAn
अर्को लेखफोहर फाल्न